‘चिन्ता नलिनुहोस् मेडिकल बन्द हुँदैन, औषधी सहजै पाइन्छ’
मकवानपुर १० चैत । औषधी व्यवसायी संघ मकवानपुरले मकवानपुरमा औषधीको आपूर्ती सहज बनाएर जनतालाई विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । औषधी व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष सुधीर दाहालले आज सोमबार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मकवानपुरे जनतालाई औषधिको अभाव नहुने जानकारी दिनुभयो । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेसंगै त्रसित बन्नुभएका मकवानपुरे जनताले आवश्यक भन्दाबढी औषधी […]
पेट्रोलको मूल्य २ रुपैयाँ मात्रै घट्नुको कारण यस्तो रहेछ
हेटौंडा, ३ चैत्र । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी गिरावट आउँदा पनि नेपाल आयल निगमले भने पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा दुई रुपैयाँ मात्रै घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी गिरावट आएपनि यहाँ दुई रुपैयाँ मात्रै घटाएको हो । ‘आधार मूल्य (खुद्रा बिक्री मूल्य)को आधारमा समायोजन गर्दा २ रुपैयाँ मात्रै घट्यो,’ निगमका एक […]
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, ग्यासको मूल्य यथावत
हेटौंडा, ३ चैत्र । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ । यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रतिलिटर चार रुपैयाँ […]
हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई
काठमाडौं, ३० फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि तोकिएको काम पूरा नगरेपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइकम टेल लिमिटेडको कामको प्रगति सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले कम्पनीसँगको ठेक्का गत वैशाखमा तोडेर नयाँ प्रक्रियामा गएको थियो। फेरि भारतीय कम्पनीलाई नै […]
मकवानपुरको राक्सिराङले सबै योजना बैशाखभित्र सक्ने
हेटौंडा, ३० फागुन । चालू आर्थिक बर्षका लागि बिनियोजित भएका सबै योजनाहरु बैशाख महिनाभित्रमा सक्नेगरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले काम अघि बढाएको छ । गाउँपालिकाले फागुन १५ गतेभित्रसम्ममा सबै योजनाहरुको सम्झौता गर्नका लागि ठेकेदार, परामर्शदाता तथा उपभोक्ता समितिहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । अनुरोध बमोजिम बिनियोजित कूल ३३१ वटा योजनामध्ये २१२ वटा योजना सम्झौता भएको योजना अधिकृत […]
नेपालीको थाप्लोमा ३७ हजार ऋण, नेपालको ऋण ११ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं, ३० फागुन । नेपालको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार माघसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । त्यसमध्ये ४ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ भने ६ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ । […]
हेटौंडामा अमेरिकी ब्राण्डको पेयपदार्थ
हेटौंडा, २९ फागुन । कोकाकोला, पेप्सीकोला जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको पेयपदार्थ करिब दुई महिना भित्र हेटौंडामा उपलब्ध हुने भएको छ । अमेरिकी ब्राण्डको आर्सीकोला कम्पनीको फ्रेन्चाईजमा हेटौंडामा पेयपदार्थ उत्पादन उद्योग स्थापना भएको हो । जोगी तालमा ३ विगाह जमिन खरिद गरी पेयपदार्थ उद्योग स्थापना गरिएको मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताउनु भयो । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–६ […]
हेटौँडामा माछ भात होटल सञ्चालनमा
हेटौँडा, २७ फागुन । हेटौंडा १० मा माछ भात होटल सञ्चालनमा आएको छ । राजकुमार महतोले सञ्चालन गर्नुभएको माछ भात होटलमा विशेष रुपमा माछा र भात उपलब्ध छ । नेपालकै माछा, नेपाली चामल, विभिन्न ८ किसिमका अचार खानाको सेटमा पाइने महतोले बताउनुभयो । तराइमा परम्परागत रुपमा जसरी माछा पकाइन्थ्यो उसैगरी आफ्नो होटलमा पनि माछा पकाउने […]
बैंकमा सुन राखे उल्टै ब्याज पाइने ! यसरी पाइन्छ ब्याज ?
काठमाडौं, २५ फागुन । अब तपाईहरुले घरमै थन्क्याएर राखेको सुनबाट उल्टै ब्याज पाउनु हुनेछ । यसका लागि तपाईले बैंकमा सुन जम्मा गरेर ब्याज लिन पाउने सुविधा गत (बिहीबार) देखि सञ्चालनमा आएको छ । अब बैंकमा सुन धितो राखेर ऋण मात्र होइन सुन जम्मा गरेर उल्टै ब्याज समेत खान पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार […]
हेटौंडा सिमेन्टमा क्लिकर उत्पादन बन्द
हेटौंडा, २४ फागुन । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले क्लिकर उत्पादन बन्द गरेको छ । उद्योगले शुक्रबारदेखि १० दिनसम्म क्लिकर उत्पादन बन्द गरेको हो । २२ हजार टन क्लिकर बाँकी रहेकाले १० दिनका लागि उत्पादन बन्द गरिएको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंहले जानकारी दिनु भयो । उहाँले मजदुर युनियन, उद्योग प्रशासन, सरोकारवाला निकायको सहमतिमा […]
भीमफेदीको सुरुङमार्ग निर्माणस्थलमा भौतिक मन्त्री, ५० प्रतिशत अध्ययन सकियो
हेटौंडा, २३ फागुन । पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माणस्थल पुगेर बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ । बागमती प्रदेशको गौरवको योजना हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा भइरहेको कामको बारेमा जानकारी लिन आज शुक्रबार मन्त्री निर्माणस्थलमै पुग्नु भएको हो । सुरुङमार्गको दक्षिणतर्फको प्रवेशद्धार भीमफेदीको कोलडाँडा नजिक पुगेर मन्त्री फुयालले […]
हेटौंडामा चैत १६ गतेदेखि हुन लागेको व्यापार मेला स्थगित, यस्तो रहेछ कारण
हेटौंडा, २१ फागुन । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत् महिला उद्यमी विकास समितिले हेटौंडामा गर्न लागेको व्यापार मेला स्थगित भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले मेला नगर्न समितिलाई निर्देशन दिएपछि स्थगित गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । विगतमा सात वटा मेला, महोत्सव तथा एक्सपो सम्पन्न गरिसकेको समितिले यही चैत १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म हेटौंडामा आठौं […]
बुधवार एकैदिनमा सुनको मूल्य यतिधेरै बढ्यो !
काठमाडौं, २१ फागुन । कोरोना भानइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सुनमा देखिँदा यसको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ । छापावाल सुन बुधबार एकैदिन प्रतितोला २२ सय रुपैयाँले बढेर ८० हजार ५ स रुपैयाँ कायम छ । हिजो (मंगलबार) भने छापावाला सुन ७८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो […]
<< Older 1234… 18 Newer >>